उग्रदक्षिणपन्थको कब्जामा विश्व, वामपन्थ किन खतरामा ?
इतिहास हेर्दा बितेको बिसौं शताब्दीको बाल्यकालदेखि नै विश्वले आधुनिक वामपन्थी दृष्टिकोणको तीब्रतालाई बुझ्न र अवलम्बन गर्न आरम्भ गरेको थियो । यसै क्रममा १९१७ मा त रुसमा लेनिनले राम्रैसँग पहिलो कम्यूनिस्ट क्रान्तिको झण्डा फहराएका थिए । त्यसले विश्वव्यापीरुपमा ठूलो र दूरगामी प्रभाव पारेको र विश्वलाई नै नयाँ मोड दिएको थियो ।
वास्तवमा बिसौं शताब्दीले आफ्नो बाल्यकाल र किशोरावस्थामा जस्तो प्रकारका संस्कारहरू पायो र ग्रहण ग¥यो, तिनले बृद्ध अवस्थासम्म आफ्नो भाग्य निर्माण गर्दै रहे । यसरी लामो समयसम्म विश्व २ किसिमको देखिँदै रह्यो । विकसित हुँदो वामपन्थी प्रभाव र बिलाउँदो दक्षिणपन्थी प्रभाव । पहिलो त्यस्तो विश्व जसले वामपन्थी दिशा ग्रहण गर्न चाहन्थ्यो र त्यसै अनुरुप विश्वलाई बदल्न, विकसित गर्न र त्यसमा बाँच्न चाहन्थ्यो । अनि, दोस्रो त्यो विश्व जसले आफूलाई यो वामपन्थी दिशाको प्रवेशबाट बचाउन चाहन्थ्यो, जोगाउन चाहन्थ्यो र विद्यमान यथास्थितिलाई नै जसैतसै कायम राखेर चल्न चाहन्थ्यो ।
तर, गति र दिशा जे–जस्तो भएपनि वामपन्थको कुनै न कुनै पक्ष सबैको सारतत्त्वमा सामेल हुन बाध्य थियो । अर्थात्, वामपन्थको कुनै न कुनै रुपमा प्रभाव दक्षिणपन्थमा पनि सामेल थियो । खासगरी साम्यवादी देशहरू र विश्वभरिका कम्यूनिस्ट पार्टीमा त यो वामपन्थ थियो, हुने नै भयो । त्यसका अतिरिक्त हामी देख्न सक्छौं कि मिश्रमा नासेर पनि, लिबियामा कर्णल कद्दाफी पनि, इण्डोनेशियामा सुकार्णो पनि, बर्मामा आङ्ग सान, सुडानमा हिलेसे लासी र बेलायतमा लेबर पार्टी लगायत विश्वमा विभिन्न किसिम र रंग रुपका आफूलाई ‘समाजवादी’ पार्टी भन्ने दल पनि देखा परे ।
सबैको उल्लेख गर्ने हो भने यो सूचि अझ धेरै लामै हुन्छ । अफगानिस्तानमा पनि तालिवानी शासन सत्ताभन्दा पहिला सोभियत समर्थक वामपन्थी दल नै सत्तामा थियो । सोभियत संघको बेचैनी र अमेरिकाको प्रतिशोधले अफगानिस्तानलाई आज अर्कै अनन्त संकटको स्थितिमा धकेलिदिएको छ । यसरी कतै वामपन्थ एउटा व्यवस्था थियो, कतै–कतै कल्याणकारी राज्यको नाममा पूँजीवादी राज्यसँगको एउटा मिश्रण थियो, त कतै केवल राष्ट्रियकरण मात्र थियो, कतै आरोप लगाउने र विरोध गरिने मसला मात्रै पनि ।
यस स्थितिमा अरु त अरु अमेरिकाको डेमोक्र्याटले कुनै अलिक कडा र जनपक्षीय कुरा गर्न खोजे भने मात्र पनि उनीहरूले ‘वामपन्थ’ ल्याउन चाहेको आरोप लाग्ने गर्दथ्यो, गर्दछ । भारतकै पनि कुरा गर्ने हो भने नेहरुले अर्थतन्त्रलाई ‘कमान्डिङ हाइट’ नाम दिएर राज्यको नेतृत्वमा अर्थतन्त्रका अरु रुपहरूलाई चलाउने कुरा गरेका थिए भने इन्दिरा गान्धीले बैंकको राष्ट्रियकरण र सामन्ती अवशेषको रुपमा रहेका ‘पिभी पर्स’ जस्ता राजा रजौटालाई समाप्त पार्ने कदम चालेकी थिइन् ।
विश्व धूरीमा सोभियत संघतर्पm ढल्केर २० वर्षे सम्झौता पनि गरेकी थिइन् । नेपालमा पनि सामन्ती राजतन्त्रले शोषणरहित समाजको सिर्जनाको कुरा सामन्ती अधिनायकवादी पञ्चायती व्यवस्थाकालमै उठाएको थियो । तर, आज २१ औं शताब्दीमा आएर धेरै कुरा बदलिएका छन् । बितेको शताब्दीको विपरीत विश्व आज दक्षिणपन्थको बाटोमा प्रतिगामी दिशामा बढिरहेको देखिन्छ ।
बितेको शताब्दीको अन्तिम २ दशकसम्म के लाग्दथ्यो भने विश्वले स्वयम्लाई विचलनकारी वामपन्थी जकडबन्दीबाट मुक्ति खोजिरहेको हो कि ! तर, त्यसो नभएर त्यो त विपरीत दिशाको प्रतिगामी यात्राको तयारी रहेछ । जुन वास्तवमा यसै शताब्दीको दोस्रो दशकदेखि आरम्भ भएर पो निस्क्यो । यतिबेला यूरोपका ३९ वटा देशमध्ये २६ देशमा त प्रष्टैसँग दक्षिणपन्थी सरकार छन् । जहाँ सिधै यस्ता सरकार छैनन्, त्यहाँ पनि तिनै दक्षिणपन्थी प्रवृत्ति र प्रभाव तीब्ररुपले बढिरहेको देखिन्छ ।
कतिसम्म भने स्वीडेनमा सधैं किनारामा रहने गरेको दक्षिणपन्थी दल यतिबेला तीब्ररुपले अघि बढिरहेको छ । सबैभन्दा राम्रो उदाहरण त स्वयं बेलायत छ, जहाँ बितेकै वर्ष मात्र दक्षिणपन्थी कन्जरभेटिभ पार्टीलाई जनताले सत्ता सुम्पिए । तर, बे्रग्जिट मुद्दामा अहिले त्यही कन्जरभेटिभ पार्टी आफूभन्दा पनि अझ बढी दक्षिणपन्थी इन्डिपेन्डेन्ट पार्टीबाट पराजित हुन पुग्यो । जर्मनीकी चान्सलर एन्जिला मर्केल पनि दक्षिणपन्थकै प्रतिनिधि हुन् । यद्यपि, शरणार्थीको मुद्दामा घोर दक्षिणपन्थी नेता फ्राउके पीटरीले उनलाई आच्छु–आच्छु पारिरहेका छन् ।
फ्रान्स र अस्ट्रेलियामा पनि यस्तै भइरहेको छ । रुस आदि देशमा त भइ नै सकेको छ । कुरा केवल यूरोपको मात्रै छैन र होइन । गत वर्ष एउटा प्रसिद्ध बृटिश पत्रिका ‘न्यू स्टेटमेन्ट’ले ४३ वटा एंग्लो–सक्सेन देशको सूचि बनाउँदा ती सबैमा दक्षिणपन्थी सरकार नै रहेको देखाएको छ । यतिबेला मानिसले भेनेजुएलाका ह्यूगो चाभेजको नामै समेत बिर्सन थालिसके ।
क्यूबा र चीनले आफूलाई आफ्नै किसिमको समाजवादको निर्माणमा लागेको भन्ने गर्छन् । तर, आधा शताब्दी अघिको परिभाषाका आधारमा हेर्ने हो तिनलाई पनि मानिसले वामपन्थी भन्नु हुने हो कि होइन ? आज सन्देहको नजरले हेर्छन् । यद्यपि, तिनले जनताका समस्या हल गर्न चालेका अनेक कदमले ती वामपन्थकै बाटोबाट आफूलाई प्रस्तुत गर्न कसरत गरिरहेको प्रष्ट देखिन्छ ।
विश्वमा दक्षिणपन्थी राजनीतिको यो डढेलो कस्तो किसिमले फैलिँदै गएको छ, यसलाई अमेरिकाको उदाहरणबाट निकै राम्रोसँग बुझ्न सकिन्छ । स्वतन्त्रता संग्राम पछिदेखि अमेरिकाको मुख्य धाराको राजनीति कहिले पनि वामपन्थी रहेको छैन । त्यहाँ त वामपन्थी शब्द प्रायः विरोधीलाई गाली गर्नका निमित्त मात्र प्रयोग गरिन्छ । यद्यपि के पनि सत्य हो भने त्यहाँको राजनीतिमा कहिले पनि त्यत्ति उग्रदक्षिणपन्थी दल वा नेताको आवश्यकता परेको देखिएन, जत्तिको गत वर्षको चुनावमा राष्ट्रपति पदका उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्पलाई परेको देखियो । यही उनको दक्षिणपन्थी सोचका कारण उनकी प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी डेमोक्रेटिक पार्टीकी हिलारी क्लिन्टनले के वक्तव्य दिनु समेत प¥यो कि – यदि इरान परमाणु सम्झौताबाट विमुख हुन्छ भने उसविरुद्ध सैनिक कारवाही हुन्छ ।
दक्षिणपन्थी दबाबको यसै राजनीतिको परिणाम नै थियो कि उदार मानिने बर्नी सेन्डर्स हिजो अमेरिकी राष्ट्रपति पदको चुनावी दौडबाट कतिबेला बाहिरिएर कसैलाई अत्तोपत्तै भएन । अमेरिकामा मात्रै होइन, यो उग्रदक्षिणपन्थी राजनीतिको सरुवा रोग संसारभरि नै तीब्र गतिमा फैलिँदै गएको छ । यसको दुष्परिणाम के–के हुने हुन् ? यतिबेला गम्भीर प्रश्न खडा भइरहेकै छ ।
विश्व यसरी नराम्रो किसिमले दक्षिणपन्थको बाटोमा किन हिँड्यो ? यो बुझ्न निकै कठिन छ । त्यसैले यस कुरालाई बुझ्न बितेको शताब्दी वामपन्थमा किन प्रवेश गरेको र चलेको थियो, त्यसमा के कसरी विचलन आयो भन्ने कुरा केलाउनुपर्ने हुन्छ । औद्योगिक क्रान्तिपछि विश्वले ती दुःख कष्टबाट मुक्ति खोजेको थियो, जुन दुःख कष्टमाथि क्रान्तिको भवन निर्माण भएको थियो ।
मजदूर वर्गका अधिकारको मागका साथ जुन आन्दोलन आरम्भ भएको थियो, त्यो केवल ती मागमा मात्र सीमित थिएन र रहेन । तिनले आफ्नो एउटा सम्पूर्ण दर्शन नै तयार गरे र भावी संसार मजदुर वर्गको संसार हुनेछ भन्ने आकर्षक सपना पनि सजाए । यो सोच र सपनाले सारा संसारलाई वामपन्थी बनाइदियो । यो कुनै आश्चर्यको कुुरा पनि थिएन । तर, आश्चर्यको कुरा के अवश्य हो भने यतिबेला जुन संसारको दक्षिण गमन भइरहेको छ, त्यसको न कुनै स्पष्ट र महत्वपूर्ण सोच छ, न त कुनै सुन्दर भविष्यको सपना छ । यदाकदा बरु यसबारे बौद्धिक दिवालियापन निश्चय नै देखा पर्दछ र के–के न गरेजस्तो गरी बाहिर आउने गर्दछ ।
निश्चय नै यसको एउटा कारण अफगानिस्तान, पश्चिमा एशिया र विश्वका अन्य क्षेत्रमा हुर्किरहेका या हुर्काउँदै गरिएको आतंकवाद पनि हो । आतंकवादी त्रूmरताको तुलनामा मानिसलाई दक्षिणपन्थी हठधर्मी अबुझजस्तो देखिने वामपन्थी उदारताभन्दा कडा र बढी प्रभावकारी लाग्ने गर्दछ । आर्थिक संकट पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कारण हुन सक्छ । केही वर्ष पहिला जब विश्वमा आर्थिक मन्दीको निकै ठूलो झट्का आयो, त्यतिबेला आफ्नो निन्द्राबाट ब्यूँझिएका वामपन्थीले के भन्न बाँकी राखेनन् भने पूँजीवादी व्यवस्था खोटो सिक्का सावित भइसकेको छ र अब यो त्यत्ति धेरै दिन चल्ने छैन । तर, त्यसयता पनि सारा संसारमा खोटा सिक्का सबैभन्दा पहिला वामपन्थ नै हुन पुगेको र तिरष्कृत पनि भएको देखिँदै आएको या त्यस्तो खोटा सिक्का तुल्याउने क्रम जारी रहेको छ ।
यो बेग्लै कुरा हो कि जे भयो, त्यो पनि कुनै राम्रो कुरा भएन । भिसा नियमलाई कडाइ गर, आप्रवासन रोक, शरणार्थीलाई लखेटजस्ता संकीर्णता देखाउने धारा नै अहिले अगाडि आइरहेका देखिन्छन् । एउटा सत्य के पनि हो भने वामपन्थलाई कसैले परास्त गरेको होइन । त्यो आफ्नो बौद्धिक तथा व्यावहारिक अन्तरविरोधकै शिकार हुन पुग्यो । अनि त्यसले गर्दा जुन खाली ठाउँ उत्पन्न भयो, त्यसमा विस्तारै दक्षिणपन्थले खुट्टा घुसा¥यो ।
अझै पनि प्रष्टसँग के भन्न सजिलो छैन भने विश्वमा आज जे भइरहेको छ, किन भइरहेको छ ? त्यसका अनेक कारण छन् । मात्र के भन्न सकिन्छ भने त्यो पनि एउटा समय थियो, जतिबेला वामपन्थले दुनियाँलाई जगाएको थियो, झक्झकाएको थियो र उठाएको थियो । तर, अहिले दक्षिणपन्थ छ यसले त्यो जन जागरणलाई मार्दैछ र आफ्नो शिकारमा विश्वभरिका आम जनतालाई नै किनारामा पार्दैछ । त्यसैले विश्वभरिका जनता पहिलेभन्दा गम्भीर र जागरुप बन्नुपर्ने समयको दबाब र पुकार छ । यसको विकल्प छैन, छ भने त्यो केवल दक्षिणपन्थ र अन्ततः विनाश मात्रै हो !
(सुवेदी नेपाल कम्यूनिस्ट पार्टीका उपाध्यक्ष हुन्।)